Magacyada Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Jubaland oo la shaaciyay. | RADIOKISMAAYO.COM
Published on August 13, 2019 by admin · No Comments
Kismaayo-KNN-Guddiga Xuduudaha iyo doorashooyinka maamulka Jubaland ayaa xalay ku dhawaaaqay magacyada Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka maamulka Jubaland, kuwaasoo mudooyinkii u danbeeyay soo xuliostoda ay ka socotay Kismaayo.
Sida Guddigu ay shaaciyeen, Tirada Xildhibaanada guud ee Baarlamaanka Jubaland waxa ay noqonayaan 73 mudane, kuwaasoo soo dooranaya Madaxweynaha cusub ee Jubaland oo doorashadiisa ay qabsoomeyso 24-ka bishan.
Axmed Cumar Maxamed Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Guddiga Madaxa bannaan ee xaduudaha & doorashooyinka Jubbaland ayaa akhriyay Magacyada Xildhibaannada Cusub oo gaaraya 73 mudane,waxaana uu sheegay in laba Xubnood ay Baarlamaanka Cusub ka harsan yihiin,kuwaas loo hakiyay sababo farsamo aawgeed.
Tags: Magacyada xildhibaaanada cusub ee jubaland